FAMPAHALALANA SY SARY JACK TZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary Jack Tzu
Alika mifangaro Jack Jack Ter Terre / Shih Tzu mifangaro
'Ity i Max, ny fangaro Jack Russell / Shih Tzu anay. Tsy alika mpamorona isan-karazany izy, fa kisendrasendra kokoa. Izy no ALOHA TSARA INDRINDRA! Ny reniny dia mpamaham-bolon-koditra madio Shih Tzu ary ny dadany dia Jack Russell manana akanjo lava misaromotra ary sendra ny fitsidihan'ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Mampiseho toetra avy amin'ny karazany roa izy ary mety ho mavitrika be toa an'i Jack Russell, fa koa alika kely malemy toa an'i Shih Tzu. Azo antoka fa manana ny palitao Shih Tzu ianao araka ny hitanao amin'ny sary, saingy manana ny tongony lava kokoa an'ny JRT ary ny orony sy ny tarehiny dia lava kokoa toy ny JRT ary tsy dia milay toa an'i Shih Tzu. Max hendry be nefa mety ho mafy loha . Nahazo ny toetra teriteran'ny fihadiana antoka izy ary koa ny fahaizan'i Jack Russell mitsambikina! Mipoka toy ny loharano ny tongony! Amin'ny ankapobeny, izy no fifangaroan'ny ray aman-dreny tonga lafatra ary tsy afaka nifaly kokoa izahay noho ny lozam-pifamoivoizana toy izao ary namorona hybrid tokana! '
Ny Jack Tzu dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell Terrier ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Aleasha. Ny reniny dia fifangaroan'ny Shih Tzu / Jack Russell ary ny dadany dia Shih Tzu madio. Alika dia alika ara-tsosialy izaitsizy. 3.5 volana izy ary 5lbs amin'ity sary ity. Tiany ny milalao fetch, nampianatra ny tenany izy. Tia milelaka sy tia anao izy. Tia mihazakazaka ao an-tokotaninay sy mitaingina fiara izahay. Mora nampiofana izy tamin'ny kabine. Tsy mpihinana be izy ary zara raha mandatsaka. Tiany ny kilalao! Ny vadiko tsy mahazaka alika fa tsy ho azy. Aleosy tsy mba mivily mihitsy ary hatreto dia mpankato be. Tiany ny milentika amin'ny masoandro. Izy io dia crate crate ary tiany ny vatony. Izy dia tsara manodidina ny zazakely sy ny zaza. Izy dia manana fipoahan'ny hyper . Navelanay handeha hihazakazaka eo an-tokotany izy. '
Harry Bosch the Jack Tzu amin'ny faha-9 volana— 'Nisafidy an'i Harry Bosch izahay taorian'ny fikarohana nandritra ny volana maro. Ny reniny dia tantely lava volo tsara tarehy miloko Jack Russell. Ny dadany dia avy amin'ny fanjakan'ny fanjakana Shih Tzu. Samy kely ny ray aman-dreny. Niavaka i Harry hatramin'ny andro nanangonantsika azy. Efa nananany ny fanaovana ny azy orinasa any ivelany ka nanomboka ny 9 herinandro dia 3 fotsiny ny lozam-pifamoivoizantsika ary tsy izy ireo no diso. Nifandray be tamin'ny mpiara-monina foana izy ary na dia efa 9 volana izao aza dia hainy ny mitantana ny tenany amin'ny alika lehibe kokoa. Alefaso !! ... eo an-damosiny ary oroka marobe. Adala amin'ny baolina izy ary hitondra ny baoliny ho an'ny ankizy ao amin'ny valan-javaboary mba hatsipy ho azy ireo. Tena mailaka izy ary afaka misambotra toy ny mpandrehitra afo! Manana zanaka milahatra milalao aminy aho ary ampifanarahiny amin'ny lalao ambany ny lalao raha vao 14 volana izy. Tena alika lavorary tokoa izy. '
'Ity no mixako Jack Russell Terrier x Shih Tzu. 1 taona mahery kely izy ary tena mavitrika. Tiany maniry mafy ary tena mankafy mihazakazaka amin'ny faritra voafefy. Faly foana izy ary manetsiketsika ny rambony ary tia milalao ny kilalao. Be fitiavana izy ary tsy maivan-doha na manaikitra. Tena manan-tsaina izy ary afaka mijoro sy mandeha amin'ny tongony aoriana. Tiany ny mihady sy milelaka toy ny adala! Noraisinay ho alika kely avy amin'ny namana tsy afaka mikarakara azy intsony izy. Novidiny tamin'ny mpiompy malaza iray izy. Ankafizo! '
'Ity i Frankie ilay “Jack Shihtz” (Jack Russell / Shih Tzu mix). Izy dia manana ny toetra tsara indrindra amin'ny karazany roa: mahay, atletika, mahatsikaiky, mafy loha , bibidia ary cuddly. Alika masiaka sy kintan'ny sarimihetsika. '
'Ity i Alfie zanako lahy mahafatifaty izay alika kely tokony ho 11 herinandro teo. Izy dia lakroa Shih Tzu sy Jack Russell. Toa niasa tsara be taminy! Izy dia manana toetra mahafinaritra, mora làlana, tsy faly ary sariaka amin'ny olona rehetra (alika sy olombelona!). Toa manana ny fitoniana sy ny 'dog dog' an'ny Shih izy miaraka amin'ny toetra mahafinaritra sy matoky an'i Jack Russell. Heveriko fa mahafatifaty ihany koa izy! Nilaza ny olona fa mitovy amin'ny Boston Terrier izy, saingy nihaona tamin'ny ray aman-dreniny aho ary mpivady hafahafa izy ireo! '
'Alikako ity. Daisy no anarany. Izy dia mifangaro Jack Russel / Shih Tzu, aseho eto amin'ny tokony ho 1 taona sy sasany. Mijery sy mikarakara an'i Jack Russell mihoatra ny Shih Tzu izy, saingy tsy misy pentina toa an'i Jack Russell. Ny orona sy ny vavany ihany no misy ny teboka. Izy dia manana angovo be ary alika tena tiana. '
Daisy the Jack Russell / Shih Tzu mifangaro toy ny alika kely amin'ny 3 volana
Mifangaro Max ilay Jack Russell / Shih Tzu amin'ny 1 taona
Max ny Jack Russell / Shih Tzu mifangaro toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro
Jack Jack the Jack Tzu amin'ny faha-7 taonany— ' Jack no alika mahatoky indrindra nananako. Tena marani-tsaina sy mampionona izy. Hipetraka izy hividy anao raha marary ianao, ary hahazo anao mihazakazaka amin'ny diany . Rehefa nihalehibe izy dia nilamina tsara. Milatsaka toy ny tsy misy hafa izy, izay no hany maharatsy ny fananana azy. Ity valan-javaboary ity dia fitambarana atidoha, tsy fivadihana ary zen. '
Sary Jack Tzu Pejy 1
Sarin'i Jack Tzu Pejy 2
mpiandry tendrombohitra Kaokazy amidy
pitbull manga mifangaro amin'ny bulldog amerikana
dachshund sy manga heeler mifangaro